Ny tari-dalana avy amin'ny Semalt: Ny dingana sivy amin'ny fanomanana ny votoatin-tranonkala
Sarotra ho an'ny tompon'ny tranonkala ny mandrindra sy mampivelatra votoaty ho an'ny mpampiasa azy,raha miara-miasa amin'ny hafa. Na izany aza dia mbola azo atao foana ny mitantana ny votoatin'ny tranonkala
Max Bell, mpitantana ny Success Successor Semalt ,fanoloran-kevitra manaraka dingana sivy ho mpitari-dalana amin'ny famoahana sy famoahana ny votoaty tsara
1. Evaluate Current Copy
Alohan'ny zavatra hafa, ny fanombanana ny dika misy amin'izao fotoana izao dia manan-tsaina araka izay ambaranyfahadisoana na zavatra izay tokony havaozina. Ny fametrahana ny votoaty sy ny fametrahana tanjona voafaritra ho an'ireo vondrona ireo dia mahatonga azy io ho mora kokoamiantoka fa ny tranonkala dia mamoaka fitaovana sarobidy ihany.
2 - web hosting new orleans. Ampahafantaro ny Tarika Audience
Ny raharaham-barotra iray dia tokony hahalala hoe iza no miteny alohan'ny hamoronana votoaty. hahazoana hevi-javatrana mamantatra ny mpihaino kinendry dia manome fanampim-pahazotoana mandritra ny fandaminana. Izany dia manamarina raha toa ny fampahafantarana iray entina hampidirinailaina na mazava tsara. Izy io koa dia manondro ny mpihaino voalohany, faharoa, ary laharam-pahamehana mba ahazoana antoka fa ny tranokala dia manome ho an'ny rehetrany mpitsidika azy.
3. Ampiasao Sitemaps
Ny Sitemaps dia miasa toy ny planeta. Raha tsy misy azy, ny tranonkala dia mety tsy hahatanteraka ny tanjona rehetrana hanendry votoatin'ny pejy mifanaraka aminy. Maro ny fandaharanasa sy rindrambaiko isan-karazany dia misy mba hanampy amin'ny famolavolana sy fandaminana ny vaovao momba nytranonkala. Ohatra toy izany ny fandaharam-potoana momba ny fandaminana ao amin'ny Microsoft Word sy ny fitaovana XMind amin'ny sehatra malalaka. Atombohy amin'ny ampahany betsakaNy votoatiny hijery raha misy pejy iray ahitana azy rehetra na mety mila pejy. Amin'ny fanatanterahana izany rehetra izany dia lasa azo atao ny manome alalana sy alàlanahametaka ny entana ao amin'ny tranokala.
4. Miara-miasa amin'ny hafa
Mampiditra olon-kafa amin'ny famerenana sy fanitsiana ireo antoka izay misy aoTsy misy fitsipi-pitenenana ary mahatsapa ho an'ny hafa. Ny fiaraha-miasa dia ahafahan'ny antoko hafa mandray anjara..Fichier tokana ho an'ny votoaty rehetra mametra nyNy fahafahana mifandray amin'ireny fifandraisana ireny sy ireo mpikirakira votoaty dia tokony hisoroka izany. Google Docs sy JumpChart dia fiaraha-miasa eo amin'ny vohikalafitaovana izay ahafahan'ny mpampiasa maromaro manome valiny.
5. Famaranana ny valin'ny tantara
Ny olona sasany dia mahatsapa fa afaka manadihady momba ny orinasa ny vohikalanyTantara. Mifanohitra amin'izany, tokony hilaza ny tantaran'ireo olon-kafa izay mety nandray soa tamin'ny vokatra na ny serivisynatolotra tao amin'ny tranokala. Ny zava-dehibe rehetra dia ny porofo ary milaza amin'ny fomba mahazatra. Ny vokatra na ny serivisy dia mila mameno ny banga ilaina,miaraka amin'ny fomba mora vakiana momba ny tombontsoa azo avy amin'ny mpampiasa.
6. Manorata ho an'ny Olombelona sy ny Fikarohana
Tsy tokony hampiditra teny manan-danja maro ao anaty votoaty ny raharaham-barotra, mandra-pahatongan'izanyny dikany na lasa tsy mendrika. Ny fampidirana ireo fehezan-teny manerana ny lahatsoratra dia ahafahan'ny mpamaky hahita ny votoatiny. Ary koa,Ny fampiasana teny manan-danja semantika hanoloana ny teny fanalahidy fototra dia tsy manova ny dikany am-pahibemaso.
7. Manaova kopia mitaky fizahan-toetra
Any amin'ny faran'ny votoaty, tokony hisy lahatsoratra milaza ny mpitsidika ny dinganaTokony handray ny manaraka izy ireo. Ny adiresy imailaka na rohy amin'ny rohy dia mamela asa mora ho an'ny mpanjifa raha mbola eo an-tampony ny orinasany sainy.
Anisan'izany ny sary fanohanana, sary, ary sary fanohanana ho an'ilay kopiadia toy ny mahasoa. Ny famakiana lahatsoratra amin'ny sariohatra lehibe kokoa na ny fijoroana vavolombelona, ​​na ny fampiasana lisitra bala dia azo ampiasaina amin'ny mpampiasaizay misafidy ny hijery lahatsoratra. Ny sora-baventin'ilay kopy dia manana andraikitra manan-danja amin'ny fiantohana ny famakiana ny kopia.
Ny fametrahana fe-potoana henjana ho an'ny olona sy ny ekipa dia manome antoka ireo tetikasamitazam-potsiny. Ny fomba iray hanaovana izany dia ny famolavolana ny famoronana votoaty ao anaty sombin-javatra mahazatra ary hiasa iray isaky ny mandeha. Ny fizaranadia tokony ho anisan'ireo voalohany noho izy mametraka ny feony ary mamantatra izay tokony hifantohan-dry zareo rehefa mandroso ilay tetikasa. Manampy amin'ny fanorenana ny datyrehefa manolotra ny asa ho amin'ny fanadihadiana miaraka amin'ny mpandray anjara, ary rehefa hanangona ny votoaty rehetra ao amin'ilay tranokala.
Ny fandaminana ny tranokala dia mila fotoana hanaovana drafitra sy hampihatra ny paikady. Amin'ny alalan'nyAmin'izany fomba izany, dia mora kokoa ny manolotra ny hatsaràna sy ny votoatin'ny tranonkala tsy misy diso.